Atrikasa China Flying Tiger CSR 2020 - mpanamboatra sy mpamatsy Shanghai | Mia Creative
Ny seminera Flying Tiger CSR tamin'ny taona 2020 dia notontosaina tany Shanghai tamin'ny 27 Oktobra. AMIN'NY 20 mpamatsy kalitao 20 ambony indrindra dia manana voninahitra lehibe izahay manatrika ity seminera ity
Nifantoka tamin'ny lohahevitra roa momba ny fanarahan-dàlana sy ny fanaraha-maso kalitao ny seminera. Amin'ny alàlan'ity fampiofanana ity dia manana fahatakarana bebe kokoa ny takian'ny mpividy ireo mpandray anjara, izay nanampy betsaka tamin'ny fanompoana ny mpanjifa. Nandritra ny seminera dia nanasongadina ny mahaolona sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny mpividy. Manana traikefa amin'ny serivisy mihoatra ny folo taona izahay ho an'ny mpanjifa eropeana sy amerikanina. Fantatsika tsara ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana. Mankato tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izahay, mampitombo ny teritery amin'ny ozinina ary manome toky fa mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa ny vokatra avoakanay rehetra.
Nifarana tamin'ny endrika milamina sy nahafinaritra ny fivoriana. Misaotra anao amin'ny sakafo atoandro matsiro sy ny dite atoandro. Tamin'ny alàlan'ity fihaonana ity dia nanamafy ny fahatakaran'ireo mpandray anjara ny mpanjifa, izay fanampiana lehibe amin'ny fanatsarana ny fahafahan'ny mpivarotra sy ny filan'ny mpanjifa. Andao hiara-mamorona ny ho avy isika!